तपाइँको विश्वस्त एप्पल उपकरणहरू कसरी परिमार्जन गर्ने आईफोन समाचार
एप्पलको दुई-चरण प्रमाणिकरण सुरक्षा विकल्प हो जुन सबै प्रयोगकर्ताहरूले सक्षम गर्नुपर्दछ। यस प्रक्रियाको माध्यमबाट तपाईं यो निश्चित गर्नुहुन्छ कि केवल नयाँ उपकरणहरू तपाईंको खातामा थप्न सकिन्छ, वा यसमा डाटा पहुँच गर्न र यसलाई परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ जुन हामीले एउटा "उपकरणहरू" को रूपमा छनौट गरेका उपकरणहरूबाट पहुँच प्रमाणीकरण गरेर भयो। तर हाम्रा उपकरणहरू परिवर्तन हुन्छन्, हामी नयाँ किन्छौं, हामी पुरानो बिक्री गर्छौं ... र यसको मतलब यो हो कि विश्वास गरिएको उपकरण अब त्यस्तो नहुन सक्छ। हामी तल वर्णन गर्दछौं कि हामी उपकरणहरूको सूचीलाई कसरी सँधै परिमार्जन गर्न सक्दछौं यसलाई सँधै अद्यावधिक गर्न.
हामीले गर्नै पर्ने पहिलो कुरा भनेको हाम्रो एप्पल खाता पहुँच गर्नु हो, यसका लागि हामी पेजमा जान्छौं https://appleid.apple.com र "तपाइँको एप्पल आईडी प्रबन्ध गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। हामी हाम्रो पहुँच डाटा प्रविष्ट गर्छौं र हामीसँग दुई-चरण प्रमाणिकरण सक्रिय भएकोले हामीले कोड पठाउनु पर्छ जुन हामीलाई पठाइनेछ हाम्रो एक विश्वसनीय उपकरणमा।
एक पटक हाम्रो खाता भित्र, हामी पर्छ "पासवर्ड र सुरक्षा" विकल्पको बायाँपट्टी रहेको मेनूमा छनौट गर्नुहोस् र फलस्वरूप "विश्वसनीय उपकरणहरू थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्" विकल्प छनौट गर्नुहोस्।.
यो मेनू जहाँ सबै iCloud खातासँग सम्बन्धित सबै उपकरणहरू देखा पर्नेछन्। तपाईं एक उपकरण देख्न सक्नुहुन्छ जुन अब तपाईंको छैन र त्यसैले सूचीमा हुनुहुँदैन। «हटाउनुहोस् on मा क्लिक गरेर यो स्वचालित तवरले हराउनेछ र यो अब उप्रान्त तपाईंको उपकरणमा कुनै परिवर्तनहरू आधिकारिक बनाउन सक्ने उपकरण हुनेछैन। तपाईंले उपकरणहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको छ तपाईको विश्वसनीय उपकरणहरूको अंश बन्न। «प्रमाणीकरण on मा क्लिक गरेर तपाईंलाई त्यस उपकरणमा एक कोड पठाइनेछ जुन तपाईं प्रविष्ट गर्नुभयो भने, यो पहिले नै तपाईंको सूचीमा समावेश हुनेछ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंसँग एक (वा अधिक) फोन नम्बर एक विश्वसनीय उपकरणको रूपमा छ। यो एकमात्र तरीका हो कि तपाईं जहिले पनि टाढाको अवस्थामा तपाईंको खातामा पहुँच गर्न पहुँच ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ तपाईंसँग भएका सबै उपकरणहरू हराउछन्। तपाईं जहिले पनि आफ्नो सिमको नक्कल अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको खातामा पहुँच गर्न त्यहाँ सन्देश प्राप्त गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iCloud » कसरी तपाईंको विश्वसनीय एप्पल उपकरणहरू परिमार्जन गर्ने
आधिकारिक अनुप्रयोगको साथ नयाँ एनबीए सीजन अनुसरण गर्नुहोस्
नयाँ एप्पल वाच घोषणाहरूको वालपेपर डाउनलोड गर्नुहोस्